Ungaba Nenkinga Yewebhu 2.0 Lapho ... | Martech Zone
NgoLwesine, Januwari 3, 2008 NgeSonto, Septhemba 30, 2012 Douglas Karr
Ngemuva kokuhlangana nomlutha omusha wokuxhumana nabantu, UDkt Thomas Ho, Ngakhangwa enye yezinsizakalo azisebenzisayo, I-Profilactic.com.
Ividiyo engenhla (chofoza kokuthunyelwe) iwijethi engiyakhile ngisebenzisa insizakalo yeProfilactic. Kuluhlu lwazo zonke izingosi ze-Web 2.0 engingowazo… ungazithola kokuklanyelwe kwami ​​okusha Mayelana nekhasi. Ngicabanga ukuthi nginenkinga!
Uma ungowanoma iyiphi yalezo zingosi, qiniseka ukungifaka ohlwini lwabangani bakho! 😉
Tags: ukusatshalaliswa kwe-pr
Jan 3, 2008 ngo-9: 03 PM
hehe, lelo iqoqo owafike lapho 🙂 ngisendleleni amasayithi amaningi wewebhu 2.0 kepha akukho lutho uma kuqhathaniswa nalokhu 😉
Umbuzo owodwa, mangaki kulawo masayithi osebenza ngempela kuwo? 😉
Jan 3, 2008 ngo-9: 13 PM
Cishe ngiyasebenza cishe kwengxenye eyodwa kwezintathu zazo… ezinye azivamile. Kwesinye isikhathi angizukuvakasha izinyanga ezimbalwa - kepha bese ngihlala kusayithi amahora.
Sekukonke? Isikhathi esiningi kakhulu!